Gịnị bụ Webrooming? Kedu ka o si dị iche na ebe a na-egosipụta mma? | Martech Zone
N’izu a, m na-enyocha ihe ndị a na-azụta n’ihe anyị na-ekwu. M mgbe ibiaghachi si n'ichepụta saịtị, mgbe ọpụrụiche e-azụmahịa saịtị, retail outlets, na Amazon. Abụghị m naanị otu. N'ezie, 84% nke ndị na-azụ ahịa na-elele Amazon tupu ịzụ ahịa
Gịnị bụ Webrooming
Ime ụlọ akwụkwọ - mgbe onye ahịa gara ụlọ ahịa iji zụta ihe mgbe ọ nyochachara ngwaahịa ahụ n'ịntanetị.
Gịnị bụ Showrooming
Ihe ngosi - mgbe onye ahịa zụtara na ntanetị mgbe nyochachara t
Ihe omuma si Koeppel Direct, Webrooming Vs Showrooming: A Retail Marketing Guide to Ezumike ppingzụ, na-agbada omume ịzụ ahịa site n'ọgbọ kwa:
Baby boomers - plọ ahịa na-ụlọ ahịa na uru otu-na-otu na-mmekọrịta na-atụ anya ihe ọmụma ahịa ọrụ.
Narị Afọ Iri - plọ ahịa na ntanetị na uru ọnụ ahịa na-emetụta.
Ọgbọ X - Zụọ ahịa na ntanetị na ozi email ahaziri iche maka ọdịmma ha na ịzụta akụkọ ihe mere eme.
Ọgbọ Z - Zụọ ahịa na ntanetị na site na ama ma nwee ọnụ ahịa pụrụ iche, mbupu n'efu, iguzosi ike n'ihe.
The infographic na-ewepụta ihe niile ndị na-ere ahịa kwesịrị ịma banyere Webrooming vs. Showrooming, gụnyere ụdị ngwaahịa ndị usoro ndị a kachasị emetụta, yana otu esi echekwa ọgbọ dị iche iche kachasị mma n'oge ezumike.
Tags: nkọwakoeppel kpọmkwemahịa ahiaegosinkọwapụta ngosiime websaịtịnkọwapụta webroomingkedu ihe ngosigịnị bụ webrooming
Ezumike Ezumike Email Marketing Guide Infographic
Dee 9, 2016 na 1: 16 AM
Ezigbo isiokwu m ga-ekwu !!
Nke a bụ ihe dị jụụ iji gụọ banyere webrooming na showrooming. Echere m na Showrooming nwere ike inye nsogbu na Jeriko.